Lahatsary: ​​Colts.com manao dokambarotra horonantsary ho an'ireo mpanohana amin'ny fomba mety! | Martech Zone
Talata, Novambra 13, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Pat dia namoaka horonantsary iray androany ho an'ny fianakavian'ireo tranokala Colts izay noheveriko fa tsy mampino - mampita ny fahafahan'ny Colts.com, myIndianaFootball.com ary MyColts.net. Tena nanangana mpilalao video tsara tarehy izy ireo izay manampy fampiasa mahafinaritra… dokambarotra miverina. Isaky ny misy manisy izany amin'ny tranokalan'izy ireo dia mahatratra mpihaino vaovao ny mpanao doka ataon'izy ireo. Vita tsara.
Nametraka fanontaniana lehibe ihany koa i Pat… miaraka amin'ireo mpitsidika 7.5 tapitrisa ao amin'ny Colts.com isan-taona, fa mpitsidika 280,000 any amin'ny kianja - vondrona iza no tena zava-dehibe? Raha vola izany dia matoky aho fa ireo mpitsidika 7.5 tapitrisa mividy entana mifandraika amin'ny Colts dia mety hihoatra ny varotra tapakila miaraka amin'ny ekipa. Na izany aza, azonao atao ny miady hevitra fa ny vodin-tsambo dia ny tabataba amin'ny lalao ary, tsy tapaka ireo olona izay mieritreritra ampy ny ekipa handany ampahany amin'ny fiovana tsara isaky ny lalao.
Tsy maintsy handeha hiaraka amin'ireo mpividy tapakila aho, Pat! Heveriko fa ny ankamaroan'ireo olona ireo dia mijanona maharitra, mandritra ny vanim-potoana tsara sy ratsy. Tsy hamaivanako velively ny fitaomana anananao amin'ny fampitomboana izany vahoaka izany HATONGA ireo mpitsidika 7.5 tapitrisa na izany aza. Fampiasam-bola mahasoa sy mahasoa amin'ny fifandraisana maharitra amin'ny mpankafy anao.
Tags: fanadihadiana momba ny hevitrafitsapana ny hevitrafanadihadiana fitsapana hevitramampihiditra barotraekosistem amin'ny varotra miditrainfographic marketing inboundpaikady marketing anatyfanadihadianawordpress muwordpress multidomain
Tambajotra sosialy ho an'ny veterans Navy amerikana!
13 Nov 2007 amin'ny 8:47 maraina
Avia, Doug… eritrereto ivelan'ny bun! (er, kianja) 🙂
13 Nov 2007 amin'ny 9:01 maraina
Hey! Nilaza aho fa fampiasam-bola lehibe sy mahasoa ilay 7.5 tapitrisa!